n'anya Seoul - Zhuji Feihu Textile Machinery Co., Ltd
Seoul bụ oge a na obodo jupụtara atọ ụtọ gastronomic nhọrọ nakwa dị ka nnukwu na-adọrọ mmasị, akụkọ ihe mere eme nlegharị anya, na ebe ịzụ ahịa.
The oge kacha mma iji gaa Seoul bụ n'oge ọkụ ihu igwe dị n'etiti n'oge okpomọkụ na n'oge ọdịda. April ma ọ bụ September bụ ndị kasị mma ọnwa nke nlegharị anya na ọnọdụ. Winter dị mma ma ọ bụrụ na ị na-elu n'èzí ahụmahụ na dị ka skying.
na Seoul, i nwere atọ isi forms nke njem ụgbọ oloko, ụgbọ ala, ụzọ ụgbọ oloko, na taxi. The kasị nhọrọ nweta gburugburu Seoul bụ Airport ụgbọ okporo ígwè Express ụgbọ okporo. Ọ nwere ihe abụọ nhọrọ awara awara na niile kwụsị. The awara awara nhọrọ bụ ndị kasị dị ka onye niile nkwụsị ga-akwụsị 12 ụgbọ tupu rutere Seoul Station. Ezie na niile stop nhọrọ bụ dị ọnụ ala karịa, ọ bụ banyere 15 nkeji iji nwayọọ karịa awara awara nhọrọ.
Seoul nwere otu nke kasị ibu ụzọ ụgbọ ụgbọ n'ụwa na 14 edoghi. O nwere ike iyi a bit na-eyi egwu, ma mgbe ị na-eji ya, ọ bụ ezigbo mfe.
Ọzọ nhọrọ na-gburugburu Seoul bụ ịgbazite ụgbọ ala. Nke a bụ otu n'ime ndị kasị nta eji nhọrọ dị ka Seoul nwere oké njem usoro.
E nwere nza nke ebe ịnọ Seoul. N'okpuru ị ga-achọta anyị n'elu na-atụ aro:
Myeongdong – bụ njem nleta na-ewu ewu nhọrọ. Ọ nwere oké shopping malls, oké oriri, na ewu ewu nightlife. Unu nwere ike ịnọ na akwụgo Seoul Myeongdong.
Gangnam bụ a district na ghọrọ ama ekele na song gangnam style. Onye nke kasị mma ebe na Gangnam bụ Garosugil. Ebe ị ga-ọrụ aka cafes, art veranda, mkpọsa na-echekwa. A oké hotel nhọrọ na mpaghara ebe a bụ Dormy Inn Premium Seoul Garosugil.
Insadong – bụ ụlọ J.Randall oké ozu ezinụlọ. Ebe ị ga-omenala ụlọ, Korean art veranda, ejiji boutiques, ebube obí eze, na teahouses. A ebe dị mma ịnọ na-CenterMark Hotel.
Everland – ndị kasị ibu isiokwu park na Korea
Lotte World – a nnukwu isiokwu park maka ụmụaka na-agwụcha ụtọ agafe.
teamLab World Seoul – bụ osisi ngosi nka nke art, egwu, na nkà na ụzụ.
N Seoul Tower – bụ ihe iconic skyscraper ebe ị pụrụ breathtaking echiche nke obodo.
TrickEye 3D ngosi nka – ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya photos. Na nke a ngosi nka, ị ga-ahụ wacky photos.
Gyeongbokgung Obí – otu n'ime ndị kasị ochie na kasị ukwuu oge ochie obí eze.
Hangang River ugbo irughari – a ebube na-enweta Gburugburu ebe nke obodo.
Dongdaemun Market – Ebe ị ga- 26 ahịa ụlọ gburugburu 50,000 dị iche iche Nsukka na 30,000 ọpụrụiche ụlọ ahịa na ebe ị pụrụ ịzụta trendiest akwa.
Namdaemun Market – Nke a bụ ndị kasị ochie ahịa na Korea. ọ nwere 400 Mecca ụlọ, 10,200 echekwa. Ị ga-ahụ ihe niile ị chọrọ, site uwe kitchenware na electronics.
Insadong – bụ ebe ị pụrụ ịchọta omenala ncheta dị ka sere, tii, ceramik, na akwụkwọ ibu.
N'ihi authentic bibimbap, ị kwesịrị ị na-agbalị Gogung na Myeong-Dong district. Ọ bụrụ na ị ga-achọ na-agbalị Korean Grịl-Haus nri kasị mma nhọrọ bụ Wang bi Jib na Gangnam si Sutbul Mapo Galbi. Ị na-enwe n'okporo ámá ụlọ dị ebe i nwere ike ọkụkọ skewers na ezi afọ.
Otu n'ime ihe ndị kacha mma ọṅụṅụ ị ga-ahụ na Seoul i nwere Bokbunjaju nke bụ a wine-mmanya ogbugbu na utu flavor, soju a Korean vodka na ndị ọzọ karịa 40 iche vodka na 200 mmanya.
Osote : Enwe Miami